Maitiro eOrange yeKushanda akandigadzirira sei kuDesktop | Martech Zone
Algebra yagara iri nyaya yandinodisisa. Iko hakuna kwakawanda dzidziso inosanganisirwa, ingori bhokisi rematurusi remaitiro uye marongero emabasa ekugadzirisa mukati. Ukazodzokera kuchikoro chepamusoro, unozoyeuka (zvakatorwa kubva Math.com):
Kutanga ita mabasa ese akarara mukati mevabereki.
Tevere, ita chero basa neanotsanangudza kana radicals.
Kushanda kubva kuruboshwe kurudyi, ita zvese kuwanda uye kupatsanura.
Chekupedzisira, kushanda kubva kuruboshwe uchienda kurudyi, ita zvese kuwedzera uye kubvisa.
Heino muenzaniso kubva Math.com:
Kuisa izvi mukusimudzira kuri nyore.
Kushanda mukati mevabereki kunoenzana neangu peji dhizaini, mune yakapusa HTML fomati. Ini ndinotanga neisina peji peji ndobva ndarizadza kusvikira riwana zvese zvinhu zvandiri kutsvaga. Kuona inoshanduka mushandisi interface dhizaini, ini ndinogara ndichishanda neXHTML uye CSS. Chero kupi kupi uko kune zvirevo (kureva. Dhatabhesi kana mhedzisiro yemhedzisiro), ini ndinopa chirevo uye ndinyore mune dummy zvinyorwa, mifananidzo, kana zvinhu.
Tevere, ini ndinoshanda nechero anotsanangudza kana madhiri. Aya ndiwo epurogiramu yangu kana dhatabhesi mabasa ayo anotora, anoshandura, uye akatakura (ETL) iyo data sezvandinoshuva kuiratidzira mune rangu rakapedziswa peji. Ini ndinonyatso shanda pamatanho mune iwo marongero kunze kwekunge mafomati mune chaiko mhinduro zvinoguma mukuvandudza mashandiro.
Chinotevera kuwanda kana kupatsanura. Apa ndipo pandinorerutsa kodhi yangu. Panzvimbo peimwe huru monolithic script, ini ngovepo yakawanda yekodhi yandinogona kuisa mukati mafaera nemakirasi. Newebhu kusimudzira, ini ndinowanzo shanda kubva kumusoro kusvika pasi, hongu.
Chekupedzisira, kushanda kubva kuruboshwe kuenda kurudyi, zvese kuwedzera uye kubvisa. Iyi nhanho ndeyekupedzisira maitiro, kuisa ekupedzisira matipi eifomu yekusimbiswa, maitiro echimiro, kukanganisa kukanganisa, nezvimwe zvakare, ini ndinowanzo shanda kubva kumusoro kusvika pasi.
Kukura kwakanaka hakuna kunyanya kuomarara kupfuura dambudziko hombe reAlgebra. Une misiyano, equations, mashandiro… uye nhevedzano yekushanda kuti uwane mhinduro dzakanakisa. Ini ndinoona akawanda evabiridzi vanongo 'zviita kuti zvishande' asi iwe unowana (sezvandinazvo) kuti kana ukasaronga nzira yako uye wotora zvine musoro nzira, unozviwana uchinyora kodhi yako uchidzokorora nekudzokorora kana matambudziko kana shanduko dzinodiwa.
Algebra yakagara yakafanana nejigsaw puzzle kwandiri. Zvagara zvainetsa, zvinonakidza, uye ndaiziva mhinduro yakapusa yaigona. Zvese zvidimbu zviripo, iwe unongoda kuti uzviwane uye uzviise pamwechete nemazvo. Kunyora kodhi hakuna kumbosiyana, asi kunonyanya kunakidza nekuti chako chinobuditsa chirahwe chero chaungade kuti chive!
Ini handisi musimudziri wepamutemo, uye handisi kunyange mukuru. Ndine; zvisinei, ndakagamuchira kurumbidzwa pane kodhi yandakanyora mumaprojekiti mazhinji. Ini ndinotenda zvakawanda zvacho imhaka yekuti ini ndinoita zvakawanda zvekugadzirira, kuchena whiteboard, schema kuburitsa, nezvimwe ndisati ndatombonyora iyo yekutanga script tag.
Tags: masvomhukurongeka kwekushandazvirongwa
Blog-Kubvarura: Catalyze, Iyo Yemagariro Network kune Software Kuvandudza uye Usability Nyanzvi
Gumiguru 23, 2007 pa 12:33 AM
Ichi chaive chinyorwa chakatsvinda zvakanaka. Ini ndakanga ndisati ndambofunga nezvekushandisa odha yekushanda kune chimwe chinhu chisinga tsanangurike sekuvandudza, asi kana iwe uchinge wazofunga nezvazvo, unoona kuti vese vari vaviri vakavanzika nenzira imwechete. Ini ndichafanirwa kumaka iyi uye ndoishandisa sereferenzi. ;]
Gumiguru 23, 2007 pa 5:36 AM
Ndatenda Stephen! Ndiri kushanda purojekiti hombe pabasa izvozvi inotambanudza matafura mazhinji uye akawanda mapeji mune zvakanyatsorongeka (ese akabatana nepeji rimwe achishandisa Ajax) uye ini ndakacherekedza mukungwarira kwandakanga ndiri uye ndikafunga kunyora nezvazvo.